Cambodia Nsrahwɛ | Nsase ne Nnipa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
WOKƆ Cambodia a, wubehu nkuraa a ɛwowɔ nsuo so, edwa a nnipa rebu fa so wom, moto a wɔde retwe nneɛma te sɛ nkokɔ ne frigye.
Cambodiafo anim te, wɔpɛ nnipa na obiara yɔnko yɛ ne busuani. Sɛ Cambodiani nnim obi koraa na ohyia no abɔnten mpo a, ɔde sista, brɔda, ante, wɔfa, nana ne nea ɛkeka ho bɛka ne din ho; ɔremmɔ no dinweɛ da!
Cambodiafo bi de ahyɛmma ayɛ wɔn fie, ebinom nso tete afie a wɔasi asi nsuo so mu. Wɔwɔ sukuu, klinik ne edwa wɔ nsuo so, na pɛtro shɛll mpo wɔ nsuo so
Cambodiafo ani gye aduaba yi ho paa
Cambodiafo pɛ ɛmo paa. Wɔnoa nnuane a, wɔyɛ no ahorow ahorow mmiɛnsa anaa nnan; wɔtaa yɛ nkwan ka ho. Wɔnkɔ nnya nsuomnam koraa. Wotumi de nnuane a ɛyɛ fremfrem, deɛ ɛka, anaa deɛ nkyene wom nyinaa si pon so.
Bɛyɛ mfe mpem mmienu a atwam no, sɛ India adwadifoɔ ne nnipa a nyamesom nti wotutu akwan rekɔ China a, na wɔfa Cambodia mpoano. Na wɔde sirikyi ne nnade kɔsesa nneɛma bi te sɛ mako, galik, ɛhyɛ nnua, asonse ne sika kɔkɔɔ. Eduu baabi no, na Cambodiafo asuasua Indiafo ne Chinafo amammerɛ, enti na Hindusom ne Buddhasom agye adwa wɔ hɔ. Ɛnnɛ Cambodiafo dodow no ara yɛ Buddhafo.
Yehowa Adansefo ka Bible mu asɛm kyerɛ Cambodiafo; ɛma wonya anidaso. Wɔde Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nhoma no aboa nnipa pii. Wɔakyerɛ ase kɔ kasa bɛboro 250 mu; Cambodia kasa ka ho.
Emu nnipa dodow: Bɛyɛ ɔpepem 14
Ahenkuro: Phnom Penh
Wim tebea: Ɛhɔ yɛ hye. Wɔwɔ osutɔbere ne ɔpɛ bere
Nneɛma a wɔde kɔ dwaman so: Ntaadeɛ, nnua, rɔba, ɛmo
Yehowa Adansefo ne Cambodiafo bɛboro 1,500 sua Bible. Adesua no ama wɔanya nsɛmmisa te sɛ eyi ho mmuae: “Ɛhe na awufo wɔ?” ne “Adɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ asase?”
Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nhoma no. Yehowa Adansefo na wɔyɛe; ɛwɔ Cambodia kasa mu (ɛno ni).